Basel: Okpueze mara mma nke họtel na ihe ngosi
Location: Mbido » Ịdee » omenala » Basel: Okpueze mara mma nke họtel na ihe ngosi
Dina n'obi Basel na Switzerland, Grand Hôtel Les Trois Rois bụ otu n'ime obodo kacha ochie na Europe. Na emepechabeghị, ụgbọ mmiri kwụsịrị n'akụkụ ebe a n'ụlọ elu nnu ma bufee ngwaahịa na Rhine ma banye n'ụwa.
E hiwere ụlọ oriri na ọ hotelụ asụ ahụ na 1681 dị ka ụlọ obibi maka ndị nwoke ma wughachi na 1844 dị ka Grand Hotel. Ndị ọbịa ya - ma bụrụkwa - ịma mma, na-eleta si n'akụkụ ụwa niile: Nwanyị eze ukwu Michiko nke Japan, James Joyce, Pablo Picasso, na Thomas Mann ịkpọ aha ole na ole, yana Elton John yana Roger Federer nwere mmasị ịbịa ebe a.
Izu gara aga, Grand Lady of Luxury Hotels natara otuto kachasị elu - "Hotellọ nkwari akụ nke Afọ 2020" na ịnata nkwanye ugwu dị ka "Nọmba 1 Gourmandise Hotel nke Switzerland" na-ejide akara 19/20 na Switzerland Gault & Millau ndu.
Mbinye aka talọ oriri na ọ Signụ Cheụ Cheval Blanc na Peter Knogl, Onye siri nri nke Afọ 2011 na 2014, mere akụkọ site na ịnweta Michelin Star nke atọ na 2016, nke mere ya ụlọ oriri na ọ 3ụ XNUMXụ XNUMX Michelin Star na Switzerland.
Peter Knogl abụrụ Chef de Cuisine nke talọ oriri na ọtaụ Cheụ Cheval Blanc kemgbe oge opupu ihe ubi nke 2007. Nwa nke onye ọrụ ugbo Bavaria, ọ malitere njem epicurean ya na ọmarịcha obodo Bavarian nke ọdọ mmiri nke Aschau im Chiemgau ebe ọ rụrụ ọrụ n'okpuru onye nlekọta nke Michelin 3 -Star celebrity siri nri Heinz Winkler, ọ bụghị banyere 5-Star Diamond na Beijing si American Academy of Hospitality Sciences tupu.
Mana ọ bụghị naanị njem nri nke na-eduga na Basel bụ ebe obibi nke ụlọ ngosi ihe mgbe ochie 40, obodo nke ọdịbendị maka ndị maara ihe, ma nwee ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na mba ahụ.
Kunstmuseum Basel nwere ụlọ ọrụ ọhaneze kachasị ukwuu na nke kachasị dị na Switzerland ma edepụtara ya dị ka saịtị nketa nke mba dị mkpa. O nwere nnukwu ọrụ nke ezinụlọ Holbein na akụkụ dị mkpa nke Lukas Cranach the Elder, yana ọrụ dị mkpa nke 19th narị afọ Paul Gaugin, Paul Cezanne, na Claude Monet iji kpọọ ole na ole.
Muselọ ebe a na-edebe ihe mgbe ochie dịka Basel Art Museum, ebe a na-edebe ihe ngosi nka nke onye na-akpụzi ígwè bụ Jean Tinguely; Onye nwere obi ụtọ Beyeler; na Museum of Cultures na-adọta ọtụtụ ndị ọbịa si n'akụkụ ụwa niile. Ma ọ bụghị naanị ụlọ ngosi ihe mgbe ochie.
Basel-aghọ a ụwa ogbo mgbe mba ndị na-eduga World Trade Fairs dị ka Baselworld, ihe ngosi maka ese na ọla, ebe guzo dị ka ezigbo ebe e wusiri ike na-adị mfe na-eri ihe karịrị US $ 1million maka 3 ụbọchị na a ụlọ na AirBnB nwere ike na-eri ihe 1,000 CHF .
ART Basel bu ihe ngosi ihe nlere na-egosi ihe osise nke ihe kariri ndi oru 4,000 ma na eme ememe ozo n’aho 50th ncheta na June 2020. Ọ bụ oge ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100,000 ndị ọbịa sitere n’akụkụ ụwa nile ga-aga Basel, nke bụ obodo nanị mmadụ 180,000 bi na ya. Ihe omume a mega na-eme ka ndị ọbịa nwee obi ụtọ mana ndị ọbịa na-achọsi ike - ndị bi na Zurich, ma gafee ókè France na Germany. Ee, ọ bụ ihe ahụ ewu ewu.
Enwere ike iji ọdịnaya nwebiisinka a, tinyere foto, na enweghị ikike edere ede site n'aka onye edemede na site na eTN.
Beijing France Ile ọbịa Hotel Michelin restaurant Rhine Roger Federer Switzerland
Ugbu a ịbanye na Gatwick Airport: A chọrọ ihu
Njem Nleta Anya: Ghost Village nke Celleno na-eme nka
Kedu ihe kpatara United Airlines ji emegide njem nlegharị anya Guam?
Ọmụmụ ihe ọhụrụ na-egosi na egwu Canine na-ebelata nchekasị na ...
Yotel na-ebupụta ụlọ nkwari akụ Joint First Ever In Downtown Miami
Akuko nyocha gbasara ahịa azụ̀ 2022 – Gburugburu ụwa...
Ihe omuma ohuru banyere mbelata ọbara mgbali elu
Onye isi njikwa ọhụrụ na Park Hyatt Siem Reap
Onye minista njem nlegharị anya nke Zanzibar ọhụrụ na-ewere ọkwa
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ RIU na ebe ntụrụndụ ọhụrụ Witch-Hunt Against...
Teas Iced Sugar dị obere ka oge na-aga maka eserese okpomọkụ
Air Transat na-amaliteghachi ọtụtụ oge ọkọchị Europe ya…
MTV Push Live: PortAventura World na Paramount Spain
Ihe mgbagwoju anya chọrọ ahụike na-akwụsị ndị njem ...
Ọgwụ desensitization ọhụrụ maka ndị nwere uche nke ukwuu...
Ọgwụgwọ ahịrị mbụ maka cell na-abụghị nke obere ụlọ…
Ndị ọrụ ozi amanyela Havila Capella Cruise ka ọ kagbuo njem